Selfies, ‘Fihaonana Sandwich’ ary ‘The Hunger Games’: Ahoana Ny Ihaikan’ny Mpikatroka Ny Lalàna Miaramila ao Thailandy · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 30 Novambra 2014 12:30 GMT
Vakio amin'ny teny বাংলা, Deutsch, Français, English, polski, Español, Català, English
Enimbolana izay no lasa raha norombahin'ny fitondra-miaramila ny fifehezana ny governemanta thailandey ary nandroaka ny mpitarika nofidiam-bahoaka, Yingluck Shinawatra, tamin'ny fanonganam-panjakana tamin'ny 22 Mey. Nahanton'ny fitondrana miaramila haingana ny lalampanorenan'ny firennea, nofoanany ny fanaovan-dalàna, napetrany ny fanasaziana ny fahalalaham-pitenenana sy fahalalahana mivory, ary notazonina vonjimaika ny mpitarika politika maro.
Na dia teo aza izany dia nampiasa ny fampitam-baovaom-piaraha-monina ny olom-pirenena Thailandey hanandra-peo sy hanintona ny fifantohana amin'ny toe-draharaha mihatra amin'ny firenena. Ireto sary manaraka ireto dia nandritra ny enimbolana farany:
Nitondra miaramila an-jatony sy fitaovam-piadiana mavesatra tao an-drenivohitra ny fitondrana miaramila tamin'ny 22 mey. Maromaro ihany ny olona nihazakazaka nanatona ny miaramila haka ‘selfies-n'ny fanonganam-panjakana’ izay sady nampiasaina ho fanambarana ara-politika no fanomezana fanampim-baovao momba ny hetsiky ny andia-tafika hoan'ny tontolo ivelan'ny firenena.
“Nitrerona” ireo mpitarika ara-politika sy mpikatroky ny demaokrasia maro ny fitondra-miaramila. Nosamborina sy notazonina ireo tsy nanaiky hitatitra tamin'ny voalohany, saingy miatrika fanagadrana taona maro any am-ponja amin'izao fotoana izao.
Nametrahan'ny fitondra-miaramila fetra haingana ny zavatra rehetra mety azo raisina ho fitsipahana ara-kevitra. Taorian'ny fandrarana fivoriana politika ataon'olona dimy noho ny mihoatra, dia nanomana ‘fihaonana miaraka amin'ny sandwich’ tao amin'ny fifampitam-baovaon'ny fiaraha-monina ny mpikatroka sasantsasany. Voamariky ny fitondra-miaramila haingana izany ka nampitandrina ny mpikatroka hampitsahatra izany haingana ry zareo.
Fotoana fohy taorian'ny nandraisany ny fahefana, dia nandrara famakian-teny, fihaonana, ary fihetsiketsehana heverin-dry zareo ho mety hampitahotra ny fitondra-miaramila. Nosamborina sy notazonina ireo mpianatra sy mpampianatra nanao fihantsiana ilay fandrarana. Nametraka ho adidy ny fitadidiana ny “Soatoavina 12” izay mifantoka amin'ny fankatoavana ny fahefana ny fitondra-miaramila, ary nitsongo dia izay hetsik'ireo tsy mankasitraka izany. Nanova ihany koa ny lesona amin'ny tantara izay manaisotra ny anaran'ny praiminisitra teo aloha Thaksin Shinawatra, izay nahazo ny fandresena rehetra hatramin'ny 2001 ny antoko nisy azy, ny fitondra-miaramila.
Ao anatin'ny endrika fanoherana rehetra, dia mandrara ny boky rehetra mety mahatonga adihevitra, toy ny “1984” an'i George Orwell ny fitondra-miaramila.
Nitrerona sy nampitandrina ny mpanao gazety tsy hitatitra ny sary ahitana ireo praiminisitra roa an'i Thailandy teo aloha, Thaksin Shinawatra sy Yingluck Shinawatra, manafosafo panda nandritra ny fitsidihany tany Shina, ny mpitarika ny fitondra-miaramila satria miteraka “loza hoan'ny filaminam-pirenena ao Thailandy.” Ny sary moa dia raisin'ny sasany ho endrika fanohanana ara-politika avy any Beijing hoan'ireo hery demaokratika ao Thailandy.
Fotoana fohy taorian'ny fanonganam-panjakana, misy ireo mpikatroka sasantsasany nampiasa ny fiarahabana amin'ny rantsa-tanana telo malaza tamin'ilay sarimihetsika “The Hunger Games” ho endrika fanoherana ara-politika. Koa satria moa misy ny sombin-tsarimihetsika navoaka ho hita manerantany, dia nanomena fanairana ara-politika momba ny fahefana manjakazaka ao amin'ny firenena ny Thailaney mpikatroka. Nikarakara fihetsiketsehana eo antokotanin'ny trano fijerena sinema any amin'ireo tanandehibe maro izy izao ary nanery ny fanafoanana ilay sarimihetsika tany amin'ireo trano fandefasana sinema tao Thailandy.